ခရစ်တော်အား တစ်လောကလုံးက မထီမဲမြင်ပြုကြ၏ | Christ Universally Devalued | Real Conversion
ခရစ်တော်အား တစ်လောကလုံးက မထီမဲမြင်ပြုကြ၏
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၄ကြိမ်မြောက် ဒေသနာတော်)
၂၀၁၄၊ မတ် ၁၆ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင် လော့အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ ဘြွမ ။တြွဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၌ ဟောကြား သောဒေသနာတော်၊
"မထီမဲမြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍၊ လူတို့၏ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူဖြစ်၏။ ငြိုငြင်ခံရသူ၊ နာကြည်းခြင်း၊ ဝေဒနာနှင့်ကျွမ်းဝင်သောသူ ဖြစ်၏။ သူတစ်ပါးမျက်နှာလွဲခြင်းကို ခံရသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ မထီမဲမြင်ပြုခြင်းကို ခံလျှက်ရှိ၍၊ ငါတို့သည် မရိုသေကြ" (ဟေရှာယ ၅၃း၃)
ဒေါက်တာ အီးဝတ်ပ် ဂျေယန်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲမှုကို ဟေရှာယပြောကြားသကဲ့သို့ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်၌ အလားတူဖြစ် ပျက်နေပါသည်။ လူအများတို့သည် ခရစ်တော်၏အကြောင်းကို ချီးမွမ်းပြောဆိုကြသည်။ လူ တို့ချီးမွမ်းသော ခရစ်တော်၏ကျင့်စဉ်၊ သွန်သင်ချက်များကြောင့် သူသည် လူကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်၏။ ပရောဖက်ဖြစ်၏ဟူသော အချက်များသည် ယနေ့ကမ္ဘာကြီး၏ လူမှုရေးပြဿနာတစ် ရပ် ဖြေရှင်းရန်အတွက်သာ ချီးမွမ်းကြ၏။ မိမိတို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသဖြင့်၊ ထာ၀ရ အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်၍၊ ခရစ်တော်သည် အပြစ်သားတို့နေရာ၌ မိမိကိုယ်ကို ပူဇော် အသေခံပေးလျှက်၊ ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့စပ်ကြား၊ ကြားဝင်ပြန်ဖြေပေးခြင်း ဖြစ်သည်ကို မသိ ကြပေ။ ဘုရားသခင်က မိမိသားအား မည်သို့မိန့်ကြားသည်ကို လူတို့မသိကြပေ။ ယနေ့ အစေ ခံကျွန်ခရစ်တော်သည် လူများတို့၏ငြင်းပယ်ခြင်းကို ခံရသည်သာမက၊ ကိုယ်တော်အား မရိုသေ ကြ" (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, William B. Eerdmans publishing Company, 1972, volume 3, p. 344).
လုသာက၊ ဟေရှာယ ၅၃သည် ကျမ်းတစ်ခုလုံး၏နှလုံးသွေးကြောကျမ်းဖြစ်၏ဟု ပြေားကြားခဲ့ပါ သည်။ သူပြောသည့်အတိုင်း မှန်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်လည်း ၎င်းအဆိုကို လက်ခံလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွှေးချယ်ထားသော ကျမ်းပိုဒ်သည် အရေးပါကြောင်းသိဖို့ရန်လိုသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် သမ္မာကျမ်းစာ ၌ လူသားသည် လုံး၀ဥဿုံ ပျက်စီးယိုယွင်းနေကြောင်း ထင်ရှားစေသော ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်ယုံ ကြည်ပါသည်။ "လုံး၀ဥဿုံပျက်စီးခြင်း" သည်ကား၊ "သစ္စာမဲပျက်စီးခြင်းကို ခေါ်သည်။ "လုံး၀" ဆိုလိုသည်မှာ "လုံးလုံးလျှားလျှား"ဟု ဆိုလိုပါသည်။ လူသားတိုင်းသည် ပထမမိဘတို့၏ ကျူးလွန်သော အပြစ်ကြောင့် လူသားထုတစ်ခုလုံး ပျက်စီးခဲ့ရခြင်းဖြစ်၏။ ဟိန်းဒယ်လ်ဘတ် အမေးအဖြေကဏ္ဍ၌ ဖော်ပြ ထားသည်မှာ လုံး၀ဥဿုံပျက်စီးခြင်းဆိုရာတွင်၊ "ပထမ မိဘ၊ အာဒံနှင့်ဧ၀တို့၏ နာမခံမှုကြောင့် ရရှိခံစား လာရသောအကျိုးဖြစ်၏။ နြွာထြွိုအဆိပ်အတောက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအပေါ် သက်ရောက်လျှက် ရှိသည်။ (The Heidelberg Catechism, Question seven). လုံး၀ဥဿုံပျက်စီးခြင်းဖြင့် လူသားတို့သည် ဘုရားသခင်ကို စိမ်းကားစေသည်။
"အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ ဇာတိပကတိစိတ်သဘောသည် ဘုရားသခင်နှင့် ဆန့်ကျင် ဘက်ဖြစ်၏" (ရောမ ၈း၇)။
ရားသခင်၏ သားတော် ခရစ်တော်နှင့်လည်း စိမ်းကားစေ၏။ လုံး၀ဥဿုံပျက်စီးခြင်း ရလဒ် ကြောင့် ရောမစစ်သားတို့က ယေရှုကို ဖမ်းဆီးရခြင်းဖြစ်သည်။
"ကိုယ်တော်ကို တံတွေးနှင့်ထွေးကြ၏။ ကျူလုံးယူ၍ ခေါင်းတော်ကိုရိုက်ကြ၏" (မဿဲ ၂၇း ၃၀)။
လုံးဥဿုံပျက်စီးရခြင်းကြောင့် ရောမဧရာဇ်ပိလတ်မင်းကြီးက ယေရှုအား
"ယေရှုကိုကား ရိုက်ပြီးလျှင် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သတ်စေခြင်းငှါအပ်လိုက်လေ၏" (မဿဲ ၂၇း၂၆)။
လုံး၀ဥဿုံပျက်စီးခြင်းကြောင့်၊ လူတို့သည် ကိုယ်တော်အား လက်ဝါးကားတိုင်၌ အသေသတ်ရန်အော် ဟစ်ခဲ့ကြ၏။
"မထီမဲမြင်ပြုခြင်းခံ၍ လူတို့၏ငြင်းပယ်ခြင်းခံရ၏။ ငြိုငြင်ခံရသူ၊ နာကြည်းခြင်းဝေဒနာနှင့် ကျွမ်းဝင်သောသူဖြစ်၏။ သူတပါးမျက်နှာလွဲခြင်းကို ခံရသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၍ မထီမဲမြင်ပြုခြင်း ကို ခံလျှက်ရှိ၍ ငါတို့သည်မရိုသေကြ" (ဟေရှာယ ၅၃း၃)။
၁။ ပထမ၊ ဇာတိလုံး၀ဥဿုံပျက်စီးသောကြောင့် လူတို့သည် ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်ကြသည်။
"မထီမဲမြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍ လူတို့၏ငြင်းပယ်ခြင်းခံရ၏" (ဟေရှာယ ၅၃း၃)။
ယနေ့ခေတ်တွင်လည်း လူအများတို့သည် ခရစ်တော်ကို ဆန့်ကျင်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ ၎င်းအကြောင်းအရာများကို အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ တိုင်းမ်နှင့်နယူးဝိဒ် မဂ္ဂဇင်းအဖုံး၌ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်နှင့် အီစတာပွဲတော်အချိန်အခါ၌ ရေးသားဖော်ပြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပါသည်။ ထိုခရစ်တော်၏အကြောင်း အရာပုံပြင်များကို ဒီဇင်ဘာခရစ္စမတ်အချိန်အခါနှင့် ဧပြီလအီစတာပွဲအချိန်အခါများ၌ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြ ၏။ တကယ်တန်းအမှန်သိခြင်းဖြင့် ဖော်ပြနေခြင်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်၏အဖုံးများတွင် ထူးခြား သော ယေရှုရုပ်ပုံများကို ပန်းချီချယ်ဖော်ပြနေကြသည်။ ယနေ့ခေတ်နှင့် မဆီလှော်အောင် ဖန်တီးရေးဆွဲ ချယ်လှယ်ခဲ့ကြသည်။ တိကျသောရည်ရွှယ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိလှစေပါ။ လွတ်လပ်သော ဓမ္မဗေဒ တွေးခေါ်လေ့လာသူများက ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း တိကျစွာမသိ၊ သားတော်ဘုရားကိုလည်း ဆန့်ကျင် လျှက် တမူရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြ၏။ ထိုကဲ့သို့သောသတင်း၊ ဆောင်းပါးများကို ရေးသားထုတ်ဝေခြင်းကို ဗြိသိန်ပုံနှိပ်တိုက်မှ ကမ္ဘာနိုင်ငံများသို့ ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားအား ရုပ်မြင်သံကြားမှ သော်လည်းကောင်း၊ ရုပ်ရှင်အားဖြင့်လည်းကောင်း နည်းမျိုးစုံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။
အထက်တန်းပညာသင်ကျောင်းသားများနှင့် ကောလိပ်ပညာသင်ကျောင်းသားအားလုံးတို့၊ သင်တို့ ကို ပညာသင်ကြားပေးသော ဆရာတို့သည် ယေရှုနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာ အကြောင်းကိုကောင်းစွာ နားမ လည်ကြသည်ကို ကောင်းစွာနားလည်ထားကြပါ။ ခရစ်တော်နှင့်သူ၏ သွန်သင်ခြင်းများကို ကျောင်းဆရာ များမသိနားမလည်ကြပေ။
"မထီမဲမြင်ပြုရခြင်းကို ခံရ၍၊ လူတို့၏ငြင်းပယ်ခြင်းကို ခံရ၏" (ဟေရှာယ ၅၃း၃)။
သင်၏အတန်းဖော်သော်လည်းကောင်း၊ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်သော်လည်းကောင်း၊ ခရစ်တော်အား ကျနိ်ဆိုကြသည်ကို သင်နားလည်ထားရပါမည်။
အကယ်၍သင်သည် ခရစ်ယာန်မိသားစုထဲက လာရောက်ခြင်းမဟုတ်ခဲ့သော်၊ သင်၌ငြိမ်သက်စွာနား ခိုရာရှိမည်မဟုတ်ပေ! သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ ယုံကြည်သူမိသားစုများထဲက မဟုတ်ခဲ့သော် ကယ် တင်ရှင်ကို ငြင်းပယ်ကြမည်ဖြစ်သည်! ထိုအခါ သင်သည် နားလည်ပေးဖို့ အလွန်ပင်ခက်ခဲပါမည်။ ခရစ်တော်ကို ငြင်းဆန်ကြသောသူတို့ကြောင့် သင်သည်ခရစ်တော်အဖို့ရပ်တည်ရန် နှစ်ခြင်းအသင်းဝင်ဖြစ် လာရခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်လာခြင်းကား လူသားဇာတိလုံး၀ ဥဿုံပျက်စီးရခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။
"မထီမဲမြင်ပြုခြင်းကို ခံ၍ လူတို့၏ငြင်းပယ်ခြင်းခံရ၏" (ဟေရှာယ ၅၃း၃)။
၂။ ဒုတိယ၊ ဇာတိလုံး၀ဥဿုံပျက်စီးသောကြောင့် လူတို့သည် ခရစ်တော်အား ငြိုငြင်လျှက် နာကြည်းခြင်းဝေဒနာကို ဖြစ်စေ၏
"ငြိုငြင်ခံရသူ၊ နာကြည်းခြင်း၊ ဝေဒနာနှင့်ကျွမ်းဝင်သောသူ ဖြစ်၏" (ဟေရှာယ ၅၃း၃)။
mကြောင့်ခရစ်တောသည် ငြိုငြင်ခံလျှက် နာကြည်းခြင်းဝေဒနာကို ခံရသနည်း? ယနေ့တွင် တစ်ကမ္ဘာ လုံးက ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်!
ကိုယ်တော်ဤလောက၌ အသက်ရှင်စဉ်တွင်၊ ကျမ်းသတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဖါရိရှဲများက ကိုယ်တော်ကို မုန်းတီးခဲ့ကြသည်။ ငြင်းပယ်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ပြင်းထန်သောဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ သည်။
"အိုယေရုရှလင်မြို့၊ ယေရုရှလင်မြို့၊ သင်သည် ပရောဖက်တို့ကို သတ်မြဲရှိ၏။ သင်ရှိရာသို့စေ လွတ်သောသူတို့ကိုလည်း ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်မြဲရှိ၏။ ကြက်မသည် မိမိသားငယ်တို့ကို အတောင် အောက်၌ စုရုံးသကဲ့သို့ သင်၏သားတို့ကို စုရုံးစေခြင်းငှါ ကြိမ်ဖန်များစွာ ငါအလိုရှိ၏" (လုကာ ၁၃း၃၅)။
ခရစ်တော်သည် အသေမခံမှီတည ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တွင်၊ လူသားတို့အပြစ်ကြွေးကြောင့် ပြင်းထန် သောဝေဒနာကို အလူးအလဲခံစားခဲ့ရသည်။
"ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား မြေပေါ်၌ကျသောသွေးစက်ခဲကဲ့သို့ ဖြစ်သတည်း" (လုကာ ၂၂း၄၄)။
(၁၇၁၂-၁၇၆၈ ခုနှစ်၊ ယောသပ်ဟတ် သီကုံးသော "ဂေသရှေမန်" ကို
သင်းအုပ်ဆရာမှ "အပြစ် သားများလာပါ" ဟူသောဓမ္မသံစဉ်ဖြင့်သီဆိုသည်)။
သင့်အပြစ်ကြွေးအတွက်သာမဟုတ်ခဲ့ရင် အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့သော နာကျင်ခြင်းဝေဒနာ ခရစ်တော်ခံ သွားသနည်း? သင့်ဇာတိလုံး၀ ဥဿုံပျက်စီးခြင်းကြောင့် ဘုရားသခင်၏ စီရင်ခြင်းကိုယ်တော်အပေါ် ကျ ရောက်ပြီး နာကျင်စွာဖြင့် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်မှ သည်ကားတိုင်ထက် အသေခံသည်တိုင်အောင် ပေးဆပ်ရ ခြင်းသည်ကား သင့်အတွက်မဟုတ်ပေဘူးလား?
(၁၈၃၈-၁၈၇၆ ခုနှစ် ဖိလစ်၊ ပီ.ပလစ် သီကုံးသော "ဟာလေလုယာ! ကယ်တင်ရှင်!")။
သင့်အတွင်းနှလုံးသားထဲက အပြစ်ကို ယေရှုဘုရားကောင်းကင်ဘုံမှ မြင်တွေ့ရသောကြောင့် ကိုယ်တော်ဝမ်းနည်းကြေကွဲရသည်မဟုတ်ပါလား? ကိုယ်တော်အား သင်ငြင်းပယ်သောကြောင့် သင့်အဖို့ ကိုယ်တော်ကြေကွဲရ၏။ ကိုယ်တော်ကို ချစ်ပါတယ်ဟု ပြောကောင်းပြောနိုင်သည်။ သင်အမှန်တကယ် ကိုယ်တော်အား ငြင်းပယ်ပြီး မကိုးစားကြောင့် ကိုယ်တော်သိတော်မူသည်။ မိမိကိုယ်ကို လေးစားပါ? ကိုယ်တော်အား မငြင်းပယ်ဘူးဆိုလျှင် အဘယ်ကြောင့် ကိုယ်တော်ကို မကိုးစားရသနည်း? ကိုယ်တော်အား မကိုးစားရခြင်းက ကိုယ်တော်ကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲစေသည်။
"ငြိုငြင်ခံရသူ၊ နာကြည်းခြင်း၊ ဝေဒနာနှင့်ကျွမ်းဝင်သောသူ ဖြစ်၏။ သူတစ်ပါးမျက်နှာလွဲခြင်း ကို ခံရသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏" (ဟေရှာယ ၅၃း၃)။
၃။ တတိယ၊ ဇာတိလုံး၀ဥဿုံ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ကိုယ်တော်သည် သူတစ်ပါးမျက်နှာလွဲခြင်းကို ခံရသည်။
"မထီမဲမြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍၊ လူတို့၏ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူဖြစ်၏။ ငြိုငြင်ခံရသူ၊ နာကြည်းခြင်း၊ ဝေဒနာနှင့်ကျွမ်းဝင်သောသူ ဖြစ်၏။ သူတစ်ပါးမျက်နှာလွဲခြင်းကို ခံရသောသူကဲ့သို့ဖြစ် ၏။ မထီမဲမြင်ပြုခြင်းကို ခံလျှက်ရှိ၍၊ ငါတို့သည် မရိုသေကြ" (ဟေရှာယ ၅၃း၃)။
ဒေါက်တာ ဂီးလ်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ "ကျွန်ုပ်တို့မျက်နှာလွဲရခြင်းသည်ကား၊ ကိုယ်တော်မျက်နှာကို ကြည့်သောအခါ ရွှံရှာဖွယ်၊ စက်ဆုတ်စရာ၊ မုန်းစရာကောင်းသော မျက်နှာရှိသဖြင့် အရိုအသေမပေး ကြချေ"။ (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I, pp. 311-312).
ကိုယ်တော်ထံမှ မျက်နှာလွဲခြင်းကား၊ လူ့ဇာတိလုံး၀ဥဿုံပျက်စီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ "လူအများ တို့သည် ခရစ်တော်၏အကြောင်းကို ချီးမွမ်းပြောဆိုကြသည်၊ လူတို့ချီးမွမ်းသော ခရစ်တော်၏ကျင့်စဉ်၊ သွန်သင်ချက်များကြောင့် သူသည်လူကောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်၊ ပရောဖက်တစ်ဦးဖြစ်သည် ဟူသော အချက်များသည် ယနေ့ကမ္ဘာကြီး၏ လူမှုရေးပြဿနာတရပ်ကို ဖြေရှင်းရန်အတွက်သာ ချီးမွမ်းကြခြင်း ဖြစ်သည်။ မိမိတို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသဖြင့် ထာ၀ရအပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်၍၊ ခရစ်တော် သည် အပြစ်သားတို့နေရာ၌ မိမိကိုယ်ကို ပူဇော်အသေခံပေးလျှက် ဘုရားသခင်နှင့် လူတို့စပ်ကြား၊ ကြားဝင်ပြန်ဖြေပေးခြင်းဖြစ်သည်ကို မသိကြပေ" (Young, ibid.).
ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူမဟုတ်သောသူတို့က၊ ယေရှုသည် "ပရောဖက်တစ်ပါး"ဖြစ်သည်၊ "ဆရာ တစ်ပါး" ဖြစ်သည်ဟူ၍ ဆန့်ကျင်ပြောဆိုကြ၏။ ကျမ်းစာ၌ဖော်ပြထားသော စစ်မှန်သောခရစ်တော်ကို ငြင်းဆန်ကြသည်။ သူတို့သည် မူရင်းခရစ်ယာန်ဘာသာကို ဆန့်ကျင်ကြသည်။ ကိုယ်စားအသေခံခြင်းကို လည်းဆန့်ကျင်ကြသည်၊ "ငါတို့မဟောသော ယေရှုတစ်ပါးကို ဟောပြောသော်လည်းကောင်း" (၂ကော ၁၁း၄) ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ "ခရစ်တော်အယောင်ဆောင်သောသူ ပေါ်လာမည်" (မဿဲ ၂၄း၂၄) ဟု သတိပေးထားသည်။ စစ်မှန်သော ခရစ်တော်ကို ဓမ္မာသစ်ကျမ်းနှင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများ၌ ဖော်ပြထားပါ သည်။ အခြားသော ခရစ်တော်သည် "အယောင်ဆောင်ခရစ်တော်"ဖြစ်မည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလု ပြောကြားသကဲ့သို့ "ငါတို့မဟောသော အခြားသောယေရှုသာ ဖြစ်မည်" မော်မွန်ဘာသာ၌ အယောင် အဆောင်ရှိသည်။ ယေဟောဝါဂိုဏ်၌ ခရစ်တော်အယောင်ဆောင်ရှိသည်။ ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်တို့၌လည်း အယောင်ဆောင် ခရစ်တော်ရှိသည်။ ဒေါက်တာ မိုက်ကယ်ဟောတန်က သူ၏စာအုပ်ဖြစ်သော ခရစ် တော်မဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာစာအုပ်၌ ဖော်ပြထားသည်မှာ၊ ယနေ့တွင် ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်ကို နတ်ဆိုး ဝိညာဉ်အလား ဖော်ကျူးနေကြ၏ (Baker Books, 2008). သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြထားသည်အတိုင်း ခရစ်တော်အယောင်ဆောင်သူတို့က စစ်မှန်သောကိုယ် တော်အား မျက်နှာလွဲကြသည်။
ဧဝံဂေလိ ခရစ်ယာန်ကြား၌လည်း ဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့ကြရသည်။ ဒေါက်တာ အေ.ဒဗလျှူတိုဇာ၊ ဧဝံဂေလိ ခရစ်ယာန်စာရေးဆရာက ၎င်းရေးသားဖော်ပြချက်ကို အောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ရညဘျစး ရညဘျစး ရညဘျစး ရညဘျစး ရညဘျစးယနေ့တွင်၊ ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်ကြား၌ အတုအယောင်ခရစ်တော်များ ပေါ်နေသည်ကို တွေ့ရပါ သည်။ ပျူရီတန်အသင်းဝင် ဂျွန်အိုဝင်က ယနေ့ခေတ်လူတို့ကို သတိပေးခဲ့သည်မှာ၊ "ခရစ်တော် အတုကိုသာ လိုလားကြမည်ဆိုလျှင်၊ ကယ်တင်ခြင်းအတုကိုသာ သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်" စစ်မှန် သောခရစ်တော်ဟာ တပါးတည်းသာလျှင်ရှိသည်။ သူ့အားဘုရားသခင်က ငါ့၏သားတော်ဟူ ၍ ခေါ်သည်။ ဘုရားမဲ့အသိဥာဏ်ရှိသောသူသည် ခရစ်တော်လူသားဖြစ်ခြင်းကို အသိမှတ်မပြု ကြပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ အသေချာပြောနိုင်သည်မှာ၊ ခရစ်တော်သည် ဤလောက၌ လူနှင့်အတူရှိ သောဘုရားဟု ယုံကြည်သည်။ သို့သော် ဘုရားဖြစ်ခြင်းသည်ကား အတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ အခု တွင်၊ ကိုယ်တော်သည် ကြားဝင်ပြန်ဖြေပေးသောအရှင်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဘုရားနှင့်အတူ ရှိသော လူသားအဖြစ်ရှိနေပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကာလ၌ ခရစ်တော်သွန်သင်တော်မူသည့်အတိုင်း လူသားသည် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ ထင်ရှားသောသူဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော် သည် အာဒံအလား၊ မောရှေကဲ့သို့၊ ရှင်ပေါလုကဲ့သို့သော လူသားပင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော် သည် ယခုတွင် ဘုန်းတော်ထင်ရှားလျှက်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် လူသားဖြစ်ခြင်းဆုတ်လျှော့ ခြင်းမရှိနိုင်ခဲ့ပါ။ ကိုယ်တော်သည် ယခုတွင် ဘုန်းတော်ထင်ရှားလျှက်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် လူသားဖြစ်ခြင်း ဆုတ်လျှော့ခြင်းမရှိနိုင်ခဲ့ပါ။ ကိုယ်တော်သည် လူသားစစ်စစ်ပင်ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းဟူသည် "ပြုပြီးသောအမှုကို လက်ခံယုံကြည်ခြင်း"အားဖြင့် မဟုတ်ပါ။ "ခရစ် တော်အဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလည်းမဟုတ်ပေ။ ကယ်တင်ခြင်းဟူသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော် အား ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သာတည်သည်။ အောင်မြင်ခဲ့ပြီးသော ဘုရားလူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကြွေးရှိသမျှကို အောင်မြင်စွာပေးဆပ်ခဲ့သော သေခြင်းမှရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူသော စစ်မှန်သောခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်သည် တည်သည် (A. W. Tozer., D.D., “Jesus Christ is the Lord,” Gems From Tozer, Christian Publications, 1969, by permission of Send the Light Trust, 1979, pp. 24,25).
ဇာတိလုံး၀ဥဿုံပျက်စီးခြင်းက ၊ မယုံကြည်သူလူတို့အား စစ်မှန်သောခရစ်တော်ထံမှ မျက်နှာကိုလွဲ စေသည်။
"သူတပါး မျက်နှာလွဲခြင်းကို ခံရသောသူကဲ့သို့ ဖြစ်၏" (ဟေရှာယ ၅၃း၃)။
၄။ စတုတ္ထ၊ ဇာတိလုံး၀ဥဿုံပျက်စီးသောကြောင့် ခရစ်တော်အား မရိုသေကြပေ။
အပိုဒ်ငယ်သုံး၏အဆုံးစာကြောင်းကို ကြည့်ကြပါစို့၊ ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက် အသံကျယ် လောင်စွာဖတ်ကြစို့၊ "မထီမဲမြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍" ဟူသော အစစာကြောင်းမှစ၍ ဖတ်ကြပါစို့၊
"မထီမဲမြင်ပြုခြင်းကို ခံလျှက်ရှိ၍၊ ငါတို့သည် မရိုသေကြ" (ဟေရှာယ ၅၃း၃)။
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီ။ "မရိုသေကြ" ဟူသောစကားလုံးကို ရှင်းလင်းကြစို့၊ တရားဟော မင်းသား စပါဂျန် ပြောကြားသည်မှာ၊
ဤသည်ကား၊ သက်ရှိလူသားထုတစ်ခုလုံး ဝန်ချတောင်းပန်ရမည့်အရာဖြစ်၏။ အမြင့်ဆုံးဘုရင် ခံ လူတန်းစားအလွှာမှ သည်အနိမ့်ဆုံးလူတန်းစားအလွှာအထိ၊ ဥာဏ်ပညာရှင်ကြီးများမှ သည်အရူးအနှက်များအထိ၊ လူကြည်ညိုလေးစားခြင်းခံ ပုဂ္ဂိုလ်များမှ သည်လူနုံလူအအထိ ဝန်ခံကြသည်မှာ "ငါတို့သည် မရိုသေကြ"ဟူ၍ ဖြစ်၏။ အသန့်ရှင်းသော သူတော်စင်တို့က ပင်လျှင် တချိန်တခါတုန်းက "ငါတို့သည် မရိုသေကြ"ဟုဆို၏။ အသက်တာမပြောင်းလဲခင် အထိ "ငါတို့သည် မရိုသေကြပေ" (C.H. Spurgeon, “Why Christ is Not Esteemed,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1978 reprint, volume LIII, p. 157).
စပါဂျန်၏ "အဘယ်ကြောင့်ခရစ်တော်သည် ရိုသေခြင်းမခံရသနည်း? ဟူသောဒေသနာထဲ၌ ခရစ်တော်ကို လက်မခံကြရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းလေးချက်ကို ဖော်ပြထားသည်။ အဘယ်ကြောင့် ပျောက်ဆုံးကမ္ဘာက ခရစ်တော်အား လက်မခံရသလဲ၊ ဘာကြောင့်မယုံကြည်သူ လူတို့က ခရစ်တော်အား တန်ဖိုးမထားကြသလဲ၊ အဘယ်ကြောင့် ခရစ်တော်အကြောင်း လေးနက်စွာ မတွေးခေါ်ကြရသလဲ၊ အဘယ် ကြောင့်မရိုသေ၊ မကိုးကွယ်ကြရသလဲ ဟူသောအချက်လေးချက်ဖြစ်သည်။ စပါဂျန်က မယုံကြည်သူတို့ က ဤအချက်လေးချက်ကြောင့် ယေရှုကို မရိုသေကြဟူ၍ ပြောဆိုခဲ့၏။
(၁) လူတို့ ခရစ်တော်ကို တန်ဖိုးမထား မလေးမြတ်ရခြင်းသည်ကား၊ မိမိကိုယ်ကို အထွန်ုအထိပ် ထားနေကြ၍ဖြစ်၏။ "မိမိကိုယ်ကိုသာ တန်ဖိုးထားခြင်း"သည် ယေရှုကို တန်ဖိုးမဲ့စေကြပြီး မိမိ ကိုယ်ကို မိမိသာ၍ ကြီးထွားအောင် လုပ်ဆောင်စေသည်။ ခရစ်တော် အဝင်မခံနိုင်အောင် ပိတ် ထားသောတံခါးမည်၏။ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ချစ်မြတ်နိုးကြ၍ ဖြစ်သည်။
(၂) လူတို့သည် ခရစ်တော်ကို တန်ဖိုးထား၊ မလေးမြတ်ရခြင်းသည်ကား၊ ဤလောကစည်းစိမ်ကို ချစ်၍ဖြစ်သည်။ စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ "ကျွန်ုပ်တို့သည် လောကနှင့်လောကီ စည်းစိမ်ပျော် ပါးမှုကိုသာ၍ တန်ဖိုးထား၊ ချစ်မြတ်နိုး၍ဖြစ်သည်"
(၃) လူတို့သည် ခရစ်တော်ကိုတန်ဖိုးထား၊ မလေးမြတ်ရခြင်းသည်ကား၊ ကိုယ်တော်ကိုမသိ ၍ဖြစ်သည်။ စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ "ခရစ်တော်၏အကြောင်းကို သိခြင်းနှင့် ခရစ်တော်နှင့် သိကျွမ်းခြင်းကြား၌ ခြားနားမှုရှိနေ၍ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏အကြာင်းကို လွဲမှားစွာသိခြင်းကား၊ လုံး၀မသိခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ်တော်ကို တကယ်မသိခြင်းကြောင့် မရိုသေကြပေ"။
(၄) လူတို့သည် ခရစ်တော်ကိုတန်ဖိုးထား၊ မလေးမြတ်ရခြင်းသည်ကား၊ "ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ အသေဖြစ်နေ၍ဖြစ်၏။ စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့သေနေကြသဖြင့် ခရစ်တော်ကို မရိုသေကြခြင်းဖြစ်သည်။ သေခြင်းနှင့်အပြစ်ကို မကျော်လွန်ကြ၊ လာဇရုလည်း မိမိ သချို Fင်း၌သာ လဲလျှောင်းနေခဲ့၏။ တနေ့ပြီးတနေ့ ဆွေ့မြေ့ယိုယွင်းပုပ်သိုးနေကြ၍ ဖြစ်သည်"။
စပါဂျန်ပြောကြားသည့်အတိုင်း၊ လူအပေါင်းတို့သည် ကယ်တင်ရှင်အား ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်တော် အား တန်ဖိုးမထားခဲ့ကြ၊ အောက်ပါကျမ်းပိုဒ်ကသင့်အား အံ့အားသင့်နေစေမည် မဟုတ်ပါလား?
"မထီမဲမြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍၊ လူတို့၏ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူဖြစ်၏။ ငြိုငြင်ခံရသူ၊ နာကြည်း ခြင်း၊ ဝေဒနာနှင့်ကျွမ်းဝင်သောသူ ဖြစ်၏။ သူတစ်ပါးမျက်နှာလွဲခြင်းကို ခံရသောသူကဲ့ သို့ဖြစ်၏။ မထီမဲမြင်ပြုခြင်းကို ခံလျှက်ရှိ၍၊ ငါတို့သည် မရိုသေကြ" (ဟေရှာယ ၅၃း၃)။
ဤတရားဒေသနာတော်အားဖြင့် မိမိတို့၏ဇာတိလုံး၀ဥဿုံ ပျက်စီးနေခြင်းကို သိစေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ယေရှုကို ငြင်းဆန်ရခြင်း၏အကြောင်းကိုလည်း စဉ်းစားစရာဖြစ်စေသည်ကို စဉ်းစားဖူးပါသလား? ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟု သင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင် သာ ပြုပြင်နိုင်သည်ကို သင်အမှန်သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဂျွန်နယူးတန်သီကုံးရေးသားသကဲ့သို့ပင် ဖြစ် သည်။
D သက်သာခရီး ကြောက်မတ်လမ်းမှာ
(၁၇၂၅-၁၈၀၇၊ ဂျွန်နယူတန်သီကုံးသော "ကျေးဇူးမေတ္တာ အံ့ဖွယ်ချိုသာ")။
ခိုင်မာသော သင့်နှလုံးက ခရစ်တော်အား ဆန့်ကျင်နေသည်ဟု သင်ခံစားပါလျှင်၎င်း၊ မိမိဇာတိသည် လုံး၀ဥသုံပျက်စီးနေ၍ ခရစ်တော်ကို ဆန့်ကျင်နေသည်ကို၎င်း သိလျှင် မိမိကိုကို ကိုယ်တော်၌ ဆက်ကပ် အပ်နှံထားပါသလား? ငြင်းပယ်ခြင်းခံရရှာသော ခရစ်တော်အား သင်သည် ယုံကြည်ကိုးစားပါမည်လား? ခရစ်တော်ကို မိမိ၏အသက်သခင်အဖြစ် ယုံကြည်လျှင်၊ အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီး အပြစ်မှလွတ်မြောက်လျှက် ချက်ချင်းကယ်တင်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ အာမင်!
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် သင်းအုပ်ဆရာမှ ဟေရှာယ ၅၂း၁၃၊ ၅၃း၃ကို ဖတ်ကြားပေးပါ သည်။
(၁၇၂၅-၁၈၀၇ ခုနှစ် ဂျွန်နယူးတန် သီကုံးရေးသားသော "ကျေးဇူးမေတ္တာ အံ့ဖွယ်ချိုသာ" ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေး ပါသည်)။
(ရောမ ၈း၇၊ မဿဲ ၂၇း၃၀၊၂၆)
၁။ ပထမ၊ ဇာတိလုံး၀ဥဿုံပျက်စီးသောကြောင့် လူတို့သည် ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ (ဟေရှာယ ၅၃း၃)က
၂။ ဒုတိယ၊ ဇာတိလုံး၀ဥဿုံပျက်စီးသောကြောင့် လူတို့သည် ခရစ်တော်အား ငြိုငြင်လျှက် နာကြည်းခြင်းဝေဒနာကို ဖြစ်စေ၏။ (ဟေရှာယ ၅၃း၃)ခ၊
(လုကာ ၁၃း၃၄၊ ၂၂း၄၄)
၃။ တတိယ၊ ဇာတိလုံး၀ဥဿုံ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ကိုယ်တော်သည် သူတစ်ပါးမျက်နှာလွဲခြင်းကို ခံရသည်။ (ဟေရှာယ ၅၃း၃)ဂ၊
(၂ကော ၁၁း၄)၊ (မဿဲ ၂၄း၂၄)
၄။ စတုတ္ထ၊ ဇာတိလုံး၀ဥဿုံပျက်စီးသောကြောင့် ခရစ်တော်အား မရိုသေကြပေ။ (ဟေရှာယ ၅၃း၃)ဃ